Ukuphrinta okuzenzakalelayo Screen Machine Suppliers Squeegee, Abakhiqizi, Factory kusuka China - Plet Ukuphrinta
Isikrini Ukuphrinta Square Squeegee SPS-ML-SL osetshenziselwa conductive aluminium nokunamathisela ukuphrinta phezu plate emuva weseli photovoltaic, emelanayo izikhathi ukuphrinta, nzima deform futhi ongaphakeme ngentengo. Ukuqina is zihlukaniswa ngemibala ehlukene Futhi efanelekayo microelectronic isikrini ukuphrinta
Fibre Glass IBhodi Squeegee Plet Inkampani waqala ukwenza uphinde uthengise SPS brand photovoltaic fiberglass ibhodi squeegee kusukela 2011. Kanye ukuthuthukiswa embonini photovoltaic, kugridi ka photovoltaic esiliva nokunamathisela is lincipha futhi izacile, FGB nokususa glue iye ngilunge futhi zandiswe izikhathi eziningana , ukuhlangabezana nezimfuneko samanje kakhulu PV zokunyathelisa. SPS-FGB-SL Squeegee kuyinto kuphela ukumelana polyurethane ukuguga, high-imvamisa ukuphrinta yaseJapan. Knife eyenziwe pr ...
Ukuyinyathelisa isihenqo ikhava yelensi efunwa kakhulu, kudingeka siqinisekise ukuthi onqenqemeni ukuphrinta akuyona jagged kanye ukushuba inki kuyinto iyunifomu. SPS-FGB fiberglass nokususa has izinzuzo ezilandelayo phezu nokususa bendabuko: 1, ukufakwa okusheshayo, akukho ukugaya ngemuva kokufakwa, ingasetshenziswa nokuzibona sekulinganisa lwemidlalo 2, amazwe ovela eJapane, polyurethane izinto zokusetshenziswa, izikhathi ukuphrinta okusezingeni eliphezulu 3, ummese onqenqemeni bushelelezi, kakhulu ukuphrinta umphumela, sithuthukise umkhiqizo sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe 4, yesikhathi eside ukuphrinta ...